aknowledge womshini wokugaya irayisi usebenza
Lapho umshini wokugaya irayisi uqala ukusebenza, yini okufanele opharetha banake?
1. Faka isigayo selayisi endaweni ebushelelezi ngaphambi kokuqala bese ubheka ukuthi zonke izingxenye ezihambisanayo zivamile, ukuxhumana kuxhumekile futhi nebhande lokudlulisa lisesimweni esihle. Naka isimo sokugcotshwa kwazo zonke izingxenye. Kungemva kokuqinisekisa ukuthi lezi zingxenye ezingenhla zivamile lapho ungenza ukuthi umshini wokugaya irayisi uqale ukusebenza.
2. Susa imfucumfucu elayisi elinsundu, njengezembozo zamatshe nensimbi. Akufanele kube khona amatshe amakhulu nensimbi , ukuze ungalimazi umshini wokugaya irayisi. Bheka ukuthi umswakama welayisi uhlangabezana nezidingo noma cha.
Uma wonke umsebenzi wokulungiselela ongenhla wenziwe kahle, manje usungaqala isigayo selayisi ukwenza isigayo selayisi.
Ngemuva kokusebenza, kukhona nezinto ezibalulekile ezidinga ukunakwa kwakho. Lapho wehlisa imishini yokuhlanza irayisi, kufanele uqaphele izinto ezilandelayo ukugwema ukulimala komshini.
1. Khombisa umshini wokugaya irayisi ngendlela efanele. Ngokuvamile kuvela kwizesekeli kuya ezingxenyeni ezinkulu futhi kusuka ngaphandle kuya ngaphakathi.
2. Hlukanisa izingxenye zomshini ngokuya ngezakhiwo kanye nokunemba kwezinga lezinto.
3. Yehlisa ukwehlisa isikhathi.
4. Hlanza udaka noma amafutha ngaphambi kokuhla bese ugcina ucocekile ngesikhathi senqubo.
5. Lungiselela kahle ukufakwa ngemuva kokudilizwa, ngaleyo ndlela kwandise ukufakwa okusebenzayo kanye nokunemba. Maka izingxenye zomshini ngenkathi kwehliswa.
6. Sebenzisa amathuluzi afanele ukudiliza isitshalo sokugaya irayisi ngaphandle kokungqongqoza okunamandla ukugwema ukulimala noma ukuvela kwezingxenye zomshini .
Ilayisi ukudla kwethu okuyisisekelo empilweni yethu yansuku zonke. Umlando welayisi ucishe ube mude njengathi emhlabeni. Ngakho-ke namuhla imakethe yelayisi iye yanda kakhulu. Ungayithola kanjani irayisi ku-paddy? Impela iRice Mill ibaluleke kakhulu. Noma kunjalo, Akunandaba noma uyikhasimende noma umphakeli, kuyadingeka kuwe ukuthi wazi ulwazi oluthile oluyisisekelo somshini welayisi njengezingxenye zomshini wokugaya irayisi nokuthi ungawukhetha kanjani futhi uwusebenzise kahle umshini wokugaya irayisi.
Izingxenye zomshini wokugaya irayisi zifaka isikrini selayisi, blade huller, nesilinda esimhlophe. Ngenxa yokuxabana okuvame ukwenzeka phakathi kwalezi zingxenye nokusanhlamvu, izingxenye eziningi ezisele zigqokwa kalula ngezinga elithile. Ngokugqoka ngokweqile, isivuno kanye nekhwalithi yelayisi emhlophe kuzokwehla impela. Ngalesi sikhathi, kufanele ushintshe izingxenye ezisele. Uyacelwa ukuthi ubheke kwiNcwadi yoMsebenzisi ukuze uthole imininingwane ngokuhlanganisa nokufaka izingxenye ezithile.
Okwakha isitshalo sokulungisa irayisi esiphakathi noma esikhulu, kudingeka izinsimbi zerayisi eziphakathi nendawo noma ezinkulu. Bangakwazi ukucubungula 10-100 amathani erayisi ngosuku. Uma isitshalo sokulungisa sincane, bese kuba phakathi, amamayela amancane elayisi noma okusanhlamvu okuhlanganisiwe kufanelekile . Bangakwazi ukucubungula azungeze amathani amaningana. Uma kungumndeni noma abathengisi basemgwaqweni abangakwazi ukuhamba, khona-ke umshini omncane wokugaya noma wokugaya irayisi uyindlela engcono kakhulu.
Xhumana nathi Ukuze wazi umshini wokugaya irayisi usebenza